ड्रिम्सको ट्रेलर रिलिज, फिल्म फागुन १९ मा फुलै फुलको मौसम तिमिलाइसंग भिड्दै – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
ड्रिम्सको ट्रेलर रिलिज, फिल्म फागुन १९ मा फुलै फुलको मौसम तिमिलाइसंग भिड्दै
भुवन केसिले निर्देशन गरेको पहिलो फिल्म ‘ड्रिम्स’को ट्रेलर यहि पौष २७, सोमवार सार्वजनिक गरिएको छ । सुन्धारास्थित सिने दि सेफ सिनेमा हलमा सो फिल्मको ट्रेलर लन्च गरिएको हो । दुइ मिनेट भन्दा लामो ट्रेलरमा अनमोलको एक्सन र प्रेमिको चरित्र देखाईएको छ ।
बिगत ३० वर्ष देखि अभिनयमा र फिल्म निर्माणमा बिताएका भुवन केसिले यो फिल्म मार्फत पहिलो पटक् निर्देशक बनेका हुन् । उनले काजोल फिल्मस ब्यानर बाट फिल्म निर्माण पनि गर्दै आएका थिए । “ड्रिम्स” काजोल फिल्मस ब्यानरको सातौं फिल्म हो। फिल्ममा अनमोल केसि र साम्राज्ञीलक्ष्मि शाह मुख्य भुमिकामा रहेका छन् । सो कार्यक्रममा अनमोल, साम्राज्ञी र भुवनले पनि बोलेका थिए ।
फिल्ममा इमेज च्यानलकी भिजे सन्ध्या केसीले पनि ब्विशेष अतिथी भूमिकामा डेब्यु गर्दैछिन् । यहि फागुन २१ बाट प्रदर्शन शुरु हुने यो फिल्म काठमाडौं, मुस्तांग र पोखरामा खिचिएको हो । सोहि दिन अर्को प्रेम कथा फिल्म, दिनेस डिसिको “फुलै फुलको मौसम तिमिलाइ” पनि रिलिज हुँदै छ ।
यस अघि pफिल्मको शुटिंगको बेलामा भुवन केसि प्रेमिका जिया केसिसंगै भए पनि संगै बसेको फोटो भने खिचेका थिएनन । तेस्तै भुवन बाट दशैँको टिका लगाएको फोटोमा पनि जियाले भुवनलाइ काटेर शेयर गरेकी थिइन ।
This entry was posted in चलचित्र and tagged Anmol KC, Bhuwan KC, Dreams. Bookmark the permalink.
← पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाडे पनि घरबार नछाडेको बताए
नग्मा श्रेष्ठ वर्ल्ड मिस युनिभर्सिटि २०१६ मा भाग लिंदै →